Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Ụmụaka Robinho Story Plus na-emeghị ihe ọ bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'Eze nke Dribble'. Ụmụaka Anyị Na-atụle Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu amara, ndu ndu ya na otutu ihe omuma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwu egwu ya ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ele akụkọ akụkọ Robinho biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ndụ mbido
Robson de Souza AKA Robinho mụrụ na 25th ụbọchị nke Jenụwarị na 1984 na São Vicente, São Paulo, Brazil site n'aka Marina da Silva Souza (nne), onye na-azụ nri na Gilvan de Souza (nna), onye bụbu onye ahịa, ugbu a onye ọrụ .
Ọ malitere ịkụ bọl na n'okporo ámá ndị dị na Sao Vicente, obodo satellite nke Santos na steeti Sao Paulo, Brazil. Ọ bụ naanị nwa nwoke nọ n'ógbè ya nwere ọtụtụ egwuregwu.
O mechara nwee ọganihu n'egwuregwu egwuregwu n'ime obodo ya. Nwa Robinho bụ nwa nwoke na onye ndú nke otu ya.
N'otu oge, o nyere ihe mgbaru ọsọ 73 dị ịtụnanya. Anyị na-ewetara gị ụfọdụ n'ime ihe ngosi ya dị ka nwatakịrị nke dugara ya ka ọ bụrụ onye kachasị amasị ya.
Ọ gara n'ihu na-agba bọl n'ime ụlọ ruo mgbe ọ bịanyere aka na ya na Santos FC na 2002 mgbe ọ dị afọ 18.
O mere ngosi 108 wee merie ihe mgbaru ọsọ 47 maka ụlọ ọrụ ahụ. Omume ya dugara ya na Real Madrid ebe e nyere ya uwe elu 10 maka nke Luís Figo na-eyibu. Ezumike ahụ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ndụ Ezinụlọ
Dị ka e kwuru na mbụ, Robinho si n'ezinụlọ ndị dara ogbenye. Gilvan de Souza nke dị n'okpuru ebe a bụ nna Robinho. Ọ bụbu nwoke na-ere ahịa nke tụgharịrị na onye ọrụ ya, niile maka ọrụ nwa ya.
Ọ bụ onye hụrụ iguzosi ike n'ihe n'anya ma na-emejọ nwa ya mgbe ọ na-anaghị etinye obi ya dum na klọb ọ na-egwuri egwu. N'aka nke ọzọ, nwa ya na-eme ihe ọ bụla ọ na-ekwu banyere iguzosi ike n'ihe. Dị ka Gulvan de Souza si kwuo, “Ọ dịghị ihe dị ka ịchọ. Ekwesịrị ịkwanyere nkwekọrịta. ”
Robinho na Nna- Gilvan.
Nne: Mama Robinho, Marina da Silva Souza bụ onye na-azụ ahịa site na ọrụ. Ọ bụ ugbu a afọ 56 dị ka ọ na-ede mgbe nwa ya nwoke, 33 (23 afọ dị iche). Ma nne na nwa nwoke dị ezigbo nso.
Na Nọvemba afọ 2004, eji egbe wakporo nne Robinho, Marina da Silva Souza. Ya na ndị enyi ya na-akwado ịbeụ mmanya na Praia Grande, mpaghara ọrụ na-eru kilomita iri anọ na ise site na Sao Paulo, mgbe ndị oji egbe batara n'ụlọ wee tinye ya n'ime buutu nke ụgbọ ala ya.
Robinho na mama m.
Robinho mgbe ọ nụrụ ka ọ nabatara iyi egwu ịtọrọ mmadụ dị ka ihe ize ndụ nke ọrụ ya. Ndị enyi kwuru na etinyere Robinho na ihe egwu dị na profaịlụ ya dị elu ma nwee ndị nchekwa. Otú ọ dị, nne ya, leghaara ndụmọdụ banyere ịdọ aka ná ntị anya.
Na mbụ, ndị na-apụnara mmadụ egbusiri ịkpọtụrụ. Mgbe ha mesịrị, ha rịọrọ maka £ 86,000 pound nke a na-akwụ ụgwọ ozugbo.
Mgbe ndị tọọrọ ya tọhapụrụ Marina da Silva Souza, di ya Carlos kọwara ihe ahụ merenụ "Ọ dịghị nnukwu ihe… ụdị ihe na-eme ụbọchị ndị a na Argentina."
O doro anya na inwe nnukwu profaịlụ na nnukwu akụ na ụba mere ka ezinụlọ Robinho bụrụ ihe mgbaru ọsọ.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ndụ mmekọrịta
Na 2009, Robinho lụrụ Vivian Guglielminetti, obi nwata ya na onye na-eme ụlọ nke Brazil onye ọ gbara kemgbe ọ bụ nwata. Ha hụrụ ibe ha afọ iri na abụọ tupu ha ekechaa eriri.
O juru Robinho anya mgbe ọ hụrụ ndị na-egwu egwuregwu na nchịkọta kpakpando nke Brazil na ememme ahụ. Mgbe ọ dọpụsịrị ụfọdụ nzuzu ụghalaahịa n'oge emume ahụ, o kwuru, sị:
'Obi dị m ezigbo ụtọ. Oge mmemme ahụ bụ otu anyị siri chọọ. Ugbu a bụ oge ị toụ mmanya na iso ndị enyi m andụọ oriri! '
Abalị agaghị echefu Robinho.
Mgbe agbamakwụkwọ ya gasịrị, ọ gbalịrị ịgbanahụ. A na-ahapụ Robinho mgbe ndị nta akụkọ na-eme mkpesa.
Ihe omume nke agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ Robinho.
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ nwoke abụọ, Robson Jr., onye a mụrụ na 17 December 2007 (19 ọnwa tupu alụmdi na nwunye ha) na Santos, na Gianluca, onye a mụrụ na 20 April 2011 na São Paulo.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu: Ihe mere o ji gbaa agbamakwụkwọ ya ume
Robinho chere oge siri ike na ụmụ nwanyị nọ na England nke mere ka ọ gbanye agbamakwụkwọ ya. Tupu agbamakwụkwọ ya, e jidere ya ozugbo ka a boro ya ebubo na ọ na-ebuso ya ebubo n'ụzọ mmekọahụ dị njọ maka ihe kpatara ya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Leeds.
Otú ọ dị, ọ gọrọ agọhie ọ bụla, a gwara ya na ọ gaghị ebute ebubo ọ bụla mgbe ọ nyochachara ndị uweojii.
O zutere ihe omume ndị ọzọ a ma ama na Brazil mgbe ya na ndị Brazil ndị ọzọ, gara ụbọchị ise n'ụtụtụ na Rio's Catwalk Club, bụ ebe a sịrị na ọ pụtara ịjụ ndị na-agba ume ka ha gbapụta na ndị kemịkal maka igbe nke ọgwụ mgbochi 40. Ọ manyere onwe ya ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ nwee ike ịhapụ enyi nwanyị ya ogologo oge mgbe ọ chọpụtara na ọ na-etinye mmekọrịta ya n'ihe ize ndụ.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Mentor ka Neymar
Ee, maka ọbụlagodi ọkara nke ndụ ya, ọ bụ n'ezie nnukwu ihe maka Neymar da Silva Santos Júnior iji nọrọ na foto onye ọzọ.
Ọ bụ ezie na, site na anya Neymar ihu, ị ga-eche na nke a niile bụ ntakịrị nke ọgba aghara.
Ọ bụrụ na ị na-eche, nke ahụ bụ Brazil Brazil Robinho cheesing na-esote ya. Oh, lee ka oge si gbanwee. Robinho na-esochi ya Pele ka ọ gwa Neymar ka ọ ghara isonyere Chelsea FC. O mere n'otu oge Neymar bu onye nzuzu banyere ijiko ndi ozo na ekele maka ndi agha ha na-agbachitere Barcelona.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ozugbo enyi gị Pele
Pele bụ ezigbo enyi na onye nkụzi Robinho ruo mgbe ọdachi ahụ mere n'agbata enyi ha. (gụọ n'okpuru)
AKWỤKWỌ: Onye gara aga Manchester City na-aga n'ihu Robinho chọrọ ịrịọ mgbaghara ozugbo Pele mgbe a kọrọ akụkọ akụkọ Brazil na-ekwu na ọ nara ọgwụ ọjọọ. Ihe Bekee mere ka o nwee mmetụta na Brazil. Ọ hapụrụ Robinho ka ọ bụrụ onye ihere ma meechu ya ihu na onye ọ kpọtụrụ aha dị ka onye nkụzi. Onye o yiri ka o chefuru arusi uku ahụ ọ bụ. “Ọ na-egosi Pele ga na-agụ akwụkwọ mgbasa ozi ndị na-akpali akpali, iji wepụta ụdị nkwupụta ọjọọ a. ” Robinho kwuru.
Ọ rịọrọ ka a jụghachi ya Pele site na ebe nrụọrụ weebụ ya. Dị ka Robinho si kwuo, "Ọ bụrụ na Pele abịaghị n'ihu ịlaghachi azụ n'okwu ya, aga m elebara okwu ya jọgburu onwe ya n'ụlọ ikpe anya. "
Ndị hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya hụrụ ihe Robinho mere Pele ekwu dị ka nkwanye ùgwù jọgburu onwe ya. Robinho emewo ka a mara aha ya n'isi na ọ chefuru nwa ọ na-agabu Pele.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ụlọ ọrụ Chelsea
Robinho amabu ya na mbufe na Chelsea, ma mesie ọchịchọ ya igwu egwu maka ụlọ ọrụ London ruo n'ehihie nke mbufe. Na 27 August, Chelsea onye isi oche Peter Kenyon kwuru na klọb ahụ "nwere obi ike" na azụmahịa ahụ ga-agafe, na Madrid nyekwara nkwenye ha maka onye ọkpụkpọ ahụ ka ọ pụọ.
Robinho na-atụ anya ịkwaga Chelsea bụ nke na mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka Manchester City, o kwuru na mberede, "N'ụbọchị ikpeazụ, Chelsea mere atụmatụ dị ukwuu ma anabatara m." N'okwu a, onye nta akụkọ zara ya, "Mean pụtara Manchester, nri?" "Ee, Manchester, gbaghara!" zara Robinho.
Na N'ajụjụ ọnụ The Guardian, Robinho kwuru na Manchester City ịbụ nnukwu klọb na ọnụnọ ndị enyi Brazil bụ Jô na Elano bụ ihe mkpali nye ya iji sonyere ndị otu ahụ.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Final Football Oge
Na 16 July 2015, Robinho bịanyere aka na nkwekọrịta ọnwa isii na China na Super Guangzhou Evergrande Taobao, nke onye ọrụ ibe ya bụ Luiz Felipe Scolari na-achịkwa. na ijikọta ya na otu onye otu egwuregwu ibe ya Paulinho. Na 23 July 2015, o mere mmalite izizi ya na Guangzhou na mba ụwa na-emegide Bayern Munich. Ọ meriri Njikọ Njikọ ndị China na oge 2015.
Na 1 February 2016, Robinho ghọrọ onye nweere onwe ya mgbe nkwekọrịta ya nwụrụ na Guangzhou. Na 11 February 2016, Robinho debanyere nkwekọrịta afọ abụọ na Atlético Mineiro.
Ụmụaka Robinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:Ihe a na-echeta ya
Echetara ya maka ngwa ngwa ya, ihe okike ya, nkà ya na ọrụ aka ya.
Echetara ya maka njiri mara ya, njikwa bọọlụ, ọgụ mmụọ na ịba mba.
A na-echeta ya maka ojiji aghụghọ na feints, dịka ntụ ụkwụ na mpempe akwụkwọ, n'ihi ụkwụ ọsọ ọsọ ya.
A na-echeta ya maka ihe ngosi ya na ike ya na bọl nke na-eme ka ndị nọnyeere ya tụnyere Pelé n'oge ọ bụ nwata.
Echetara ya maka ike ya nwere onwe ya. Otu n'ime ndị egwuregwu ole na ole nwere ike igwu egwu ọtụtụ ọnọdụ, gụnyere nku.
Echetara ya maka ọrụ ya dị ka ịkwado n'ihu ma ọ bụ dị ka onye na-eti ihe, na ọbụna dị ka onye na-eti ọkpọ mgbe ụfọdụ.
Echetara ya maka ọchịchọ ya itinye aka na nrụpụta nke egwuregwu ndị otu ya, yana ike ya maka akara na imepụta ihe mgbaru ọsọ.
A na-echeta ya maka enweghị ọrụ ọ na-adịghị mma, enweghị ịdọ aka ná ntị, na ahụ dị gịrịgịrị nke na-edugakarị ya ka ọ lakpuo ala.
Echetara ya maka talent ọ gosipụtara n'oge ọ bụ nwata.
Echetara ya maka nkwekọ na ọrụ ya. Somefọdụ boro ya ebubo na egwuregwu nke ịghara ibi ndụ kwekọrọ na ya.
Echetara ya dị ka onye a na-akpọbu Pele onye nọchiri ya. Robinho ghọrọ nnukwu mmechuihu nye ọtụtụ n'ime ndị na-egwu ya na ndị football.
Obi abụọ adịghị ya, Robinho ka na-abụ akụkọ akụkọ bọọlụ na otu BONAFIDE nke ANY OF NA-AKW OFKWỌ ND OF AKW FOKWỌ AKW CLKWỌ.
Bọchị agbanwee: Ọktọba 5, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 6, 2020